Banijya News | उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सिडिओहरूको बैठक बस्दै, निषेधाज्ञाबारे के होला निर्णय ? - Banijya News उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सिडिओहरूको बैठक बस्दै, निषेधाज्ञाबारे के होला निर्णय ? - Banijya News
उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सिडिओहरूको बैठक बस्दै, निषेधाज्ञाबारे के होला निर्णय ?
उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु (सिडिओ) को बैठक आज बस्दैछ । पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञाको समय सोमबार सकिनै लाग्दा थप निर्णय गर्न आज बैठक बस्न लागेको हो ।
बैठक दिउँसो २ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बस्ने ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको हिजो (शुक्रबार ) बसेको अनौपचारिक बैठकले केहि खुकुलो बनाएर निषेधाज्ञा एक हप्ता थप्ने छलफल गरेको हो । निषेधाज्ञा थप्नेबारे बारे आज आईतबार पुःन बैठक बसी निर्णय गर्ने बताईएको छ । कुन–कुन क्षेत्र खुलाउने तथा कुन कुन क्षेत्र नखुलाउने भन्नेबारे कुनै निर्णय नभएको जनाईएको छ ।
बर्खा लागेसँगै खेतीपातीकाे सिजन सुरु भएकाे छ भने सरकारले असार १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्रकाे घाेषणा गरिसकेकाे छ। यी अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै विद्यालयका पुस्तक ढुवानी र बिक्रीका लागि पुस्तक पसल सञ्चालन गरिँदैछ। कृषि र विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि आवश्यक सतर्कता अपनाइ खुकुलो बनाउने तयारी छ।